Shirkii golaha wasiirada ee IGAD oo Addis ababa ka furmey. - Hargeele - Wararka Somali State
Shirwaynihii 47aad ee Golaha wasiirada Urur Gobaleedka hormaarinta Bariga Afrika ee IGAD ayaa Magaalada Addis Ababa ee Xarunta caasimada itoobiya kafurmay. Shirwaynaha Golaha wasiirada Urur Gobaleedka IGAD ayaa lasheegay in diirada lagu saarayo Qaabdhismeedka iyo nidaamyada shaqada urur Gobaleedka. Sidookale kulanka Golaha wasiirada IGAD ayaa lagu falanqayn doona dhaq dhaqaaqyada Siyaasadeed ee badda cas iyo Gacanka cadmeed. Dhanka kale doorashada gudoomiyaha urur Goabaleedka Dawladaha bariga Afrika ee IGAD ayaa shir albaabadu uxidhan yihiin lagu dooran doonaa. Shirkan caadiga ee golaha wasiirada IGAD ayaa waxaa kaqaybgalaya wakiilada qaramada midoobay, midoowga yurub iyo hay’ado kale oo caalami ah. Ugu dambayntiina waxaa isaguna barri Xarunta midoowga Afrika ee magaalada Addis ababa kafurmi doona shirwaynihii caadiga ee hogaamiyeyaasha urur Gobaleedka Dawladaha bariga Afrika ee IGAD. iyado hogaamiyaal uu kamid yahay Madaxwaynaha Jamhuuriyada DJabuuti ismaaciil cumar geele ay Addis Ababa galeen.
Arsenal oo guuldarro la kulantay & dhamaan natiijooyinka kulamadii caawa laga ciyaaray tartanka Europa League …+SAWIRRO
Hogaanka sare ee xisbiga PP iyo qaar ka mid ah aqoonyahan deegaanka oo ka Hadley arimaha xisbiga.